Ireo safidy eo amin'ny fiainana
"Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza." Deoteronomia 30:15
"Koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao." Deoteronomia 30:19
Ny olombelona dia afaka mieritreritra sy misafidy araka izay tian'ny sainy. Ny safidiny voadinika tsara dia miankina amin'izay ao anatiny lalina ao, izany hoe ny fony, araka ny lazain'ny Baiboly (Ohabolana 4:23). Saingy ny fanabeazana azony, ny tontolo ara-piarahamonina misy azy, ny zavatra malaza amin'io fotoana io, ary antony maro hafa ihany koa, dia samy mamaritra ny fanapahan-kevitra raisiny.
Ahoana no hanaovana safidy tsara? Ny Baiboly dia milaza lalana isan-karazany, ary avy eo, maneho amintsika izay tsara indrindra.
Ho hitantsika ao anatin'ny takila maromaro ny andinin-tSoratra Masina izay ampiasana ny teny hoe: "aleo". Mitari-dalana antsika mankany amin'ny lalana ankasitrahin'Andriamanitra izany. Manaitra izy ireny indraindray, ary mampieritreritra satria, raha araka ny fisainantsika, dia safidy mifanohitra amin'izany no ataontsika.
Tsy mitovy ny zavatra rehetra: misy ny tsara kokoa noho ny hafa. Na dia eo aza ny korontana misy eto amin'izao tontolo izao, dia miezaka ny mpino hanao ny safidiny miaraka amin'Andriamanitra, ary mety aminy izany. Ny mahasoa dia indraindray mifanohitra amin'ny fihevitry ny besinimaro. Koa mety ho irery sy tsy azon'ny olona ny mpino... Saingy Andriamanitra kosa mampahery azy hoe: "Izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak'Andriamanitra?" (1 Jaona 5:4-5).